रुघा र जोरो त हो दुईचार दिन घरमै हेरौं भन्दै बसेका भुपालको अचानक मृत्यु – Sapana Sanjal
अस्पताल पुगेको तेस्रो दिन उनको मृत्यु भयो। पारिवारिक स्रोतका अनुसार उनमा कुनै पनि दीर्घरोग थिएन। कोरोना संक्रमणकै कारण उनको मृ,त्यु भएको आफन्तको दाबी छ। आइतबार वीर अस्पताल ल्याउँदाल्याउँदै कीर्तिपुरका ३८ वर्षीय युवकको मृत्यु भयो। उनलाई होम आइसोलेसनबाट वीर अस्पताल लैजाने क्रममा मृ,त्यु भएको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ। युवक किन ढिला पुगे भन्ने विषयमा जानकारी छैन।
उनीसहित दिउँसोसम्ममा चारजनाको मृत्यु भएको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ। पाँच दिनयता वीरमा मात्र दैनिक चारपाँच जनाको दरले कोरोना संक्रमितको मृ,त्यु हुने गरेको छ। शिक्षण अस्पतालका अनुसार आइतवार अस्पताल आइपुगेको केही समयमै ३० वर्षीय युवकको आइसियुमा मृ,त्यु भयो। उनी पालो पर्खेर आइसियु पुग्ने क्रममा मृ,त्यु भएको अस्पतालका आइसियु विभाग प्रमुख डा.सुभाष आचार्यले बताए।
अस्पतालको अक्सिजन क्षमताभन्दा बढी बिरामी भर्ना भएका छन्। अस्पतालको क्षमताभन्दा १० गुणा बढी खपत हुने कारण सबैलाई अक्सिजन पुग्दैन। त्यसको विकल्प सिलिन्डर र अस्थायी लाइन अक्सिजन व्यवस्थापन गरिएको छ। डा.आचार्यका अनुसार कोभिड आकस्मिक कक्षको ढोकामा जबरजस्ती बसेका बिरामी जो तुरुन्तै अक्सिजन चाहिने अवस्थाका हुन्छन् र वृद्ध पनि हुन्छन्, भनेको बेला अक्सिजन नपाउँदा त्यस्ता बिरामीको मृ,त्यु हुने गर्छ।
शुक्रराज सरुवा रोग अस्पतालले पनि क्षमताभन्दा बढी बिरामी आएका कारण अक्सिजन व्यवस्थापन गर्न हम्मे परेको जनाएको छ। अस्पतालका निर्देशक डा.सागर राजभण्डारीका अनुसार अस्पतालको बेड क्षमताभन्दा बढी बिरामी राखेर सिलिन्डरबाट औषधि दिइएको छ। ‘अरू अस्पतालले पन्छाउन खोज्छन्, स्वाँस्वाँ भएर आएका बिरामीलाई फर्काउन सकेनौं’, उनले भने।
लिक्विड प्लान्टले आइसियु र भेन्टिलेटरलाई मात्र थाम्ने भएकाले अरू बिरामीलाई अक्सिजन व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ परेको उनले सुनाए। शिक्षण अस्पतालका कोभिड उपचार संयोजक डा. सन्तकुमार दासका अनुसार धेरै जसो बिरामीको ढिलो उपचारमा पुग्दा मृ,त्यु हुने गरेको छ।
पाँच दिनसम्म ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने भएमा र श्वास–प्रश्वासमा कठिनाइ आउने बित्तिकै अस्पताल पुगेमा कुनै न कुनै व्यवस्थापन हुने र यस्ता बिरामीलाई बचाउन सकिने उनी बताउँछन्। ‘अहिलेको कोरोनाका बिरामीमा अनिश्चित समयमा निमोनिया देखिएकाले ज्वरो र श्वासको समस्या बढ्नेबित्तिकै अस्पताल पुग्नुपर्छ’, उनले भने। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
Prev.त्यसपछि यी युवती युवकको घरमा पुगेकी थिईन….!